Undelete | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Undelete. Show all posts
Delete Skype History Network Edition 1.2.1 | 9.08 MB
How often you think about your privacy in Internet? How often you would like to get back messages you already sent in Skype Your Skype messages are stored on Skype servers, on all your devices where you signed-in to Skype™, on devices of your conversations partners. Think also about backup servers, Internet archives.
Home Page: http://deleteskypehistory.com
ကဏ္ဍ Skype, Undelete
Lazesoft Windows Recovery Unlimited Edition 3.4 (BootCD) | 187.27 MB
– Improved WinPE Builder New!.
– Improved Media Builder GUI New!.
– Fully supports Windows 2008 R2, 2008, 2003, 2000 servers (Only Server Edition)
– Improved WinPE Builder
– Improved Media Builder GU
▼ Part - 1 ▼ And ▼ Part -2▼
ကဏ္ဍ Bootable, Recover, Undelete, Window
ဒီကောင်လေး ကတော့ FAT, NTFS, NTFS + EFS, MacOS HFS+, Linux Ext2/Ext3/Ext4 အစ ရှိသည့် file systems များ ကို Recover လုပ်နိုင် သည့် အပြင် deleted သို့ မဟုတ် damaged partitions အပိုင်း တွေ ကို လည်း ပြန် ပြီး Restore ပြုလုပ် နိုင် ပါသည်။
CD/ DVD/ USB disk ကို အသုံး ပြုပြီး data recovery လုပ် ယူ နိုင် ပါ တယ်။ နောက် ထပ် လုပ် ပိုင် ခွင့် တွ အများ ကြီး ပါ။
Full ဖြစ် စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့ ဖိုင် ထဲမှာ Crack ဖိုင်ကို ထည့် သွင်း ထားပြီး အင်စတော လုပ် နည်း ကို အရင် ဖတ်ပါ။
Active@ UNDELETE 9.5 Data Recovery Toolkit Software to Restore Deleted Files and Recover Lost or Damaged Volumes. Active@ UNDELETE Enterprise package includes all features of Professional package as well as recovery from damaged RAID disk arrays and Network Recovery functions.
Whats new in version 9.5.59:
- Kernel version 2014.05.22
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, July 31, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Recover, Undelete
Active Undelete Enterprise 9.3.5.0 | 168.4 Mb
ဒီကောင်လေး ကတော့ data recovery software ပဲဖြစ်ပါတယ်။ deleted files နဲ့ restore deleted
partitions တွေကို ပြန်လည် recover လုပ်တဲ့ နေရမှာတော့ powerful လေးပါပဲ။
NTFS, FAT, FAT32, exFAT, HFS+, Ext2/Ext3/Ext4, UFS file systems စသည့် lost files တွေ ကို
Recovers လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် မှားဖျက် မိတဲ့ Files နဲ့ Folders တွေကို
၀င်းဒိုး အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက်ဒေါင်းလော့ ဖိုင်ထဲမှာ Crack ဖိုင် ထည့်သွင်း
ပြီး ဘယ်လို အင်စတော လုပ်ရလဲ ဆိုတာ How to install ကိုနှိပ်ပြီး အရင်ဖတ်ပါ။
ကဏ္ဍ Undelete, Uninstaller
မိမိ ဖုန်းမှာ မှားဖျက်မိတဲ့ Data တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် SD Card ကို Format ချလိုက်လို့ ပျက်သွားတဲ့ Data တွေပဲ
ဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည် ရယူနိုင်အောင် စွမ်းဆောင် ပေးတဲ့ APK လေးကို လက်ဆောင် ပေးချင်ပါတယ် …
အသုံးပြုပုံ လေးက ရိုးစဉ်းလွန်းလို့ မိမိ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Visit: http://hexamob.com or https://play.google.com
Undelete your pictures, videos or other files now!
tags: undelete, pictures, images, photos, video, audio, files, recover, deleted, files, recovery
Play Store Link: Hexamob Recovery Lite Undelete
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, April 16, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Undelete